Waa kuma weeraryahanka ugu fiican Ingiriiska? - BBC News Somali
Waa kuma weeraryahanka ugu fiican Ingiriiska?
Rooney xalay ayuu goolkiisii 50aad ka dhaliyay xulka dalka Switzerland oo 2 - 0 ay uga badiyeen xulka Ingiriisku. Goolka 1aad waxaa dhaliyay Harry Kane oo ciyaarta beddel ku soo galay iyadoo 0-0 la isku mari la'yahay.
Khubarada BBC iyo taageerayaasha kubbadda cagta ayaa arrintan ka dooday kaddibna ra'yi u codeeyay.